Izindaba Zokuphepha ZaseShanghai zaseShanghai News China Security Security News ngoFebhuwari 27, uHebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd. zinikele ngaphezu kwe-2 million yuan kwiRed Cross Society yesiFundazwe saseHubei. Lezi zidakamizwa zonke ziyizidakamizwa ze-heparin ezidingeka ngokuphuthumayo ekwelapheni iziguli ezine-pneumonia entsha ye-coronary. Le mishanguzo engenhla izohanjiswa ezibhedlela ezingama-42 eHubei kufaka iWuhan Jinyintan Hospital. UChangshan Pharmaceutical uthe ukubuyisela emphakathini nokunikezela uthando izibopho zomphakathi ezibalulekile zezinkampani ezifakwe ohlwini. Lapho ubhekene nalolu bhubhane, i-Changshan Pharmaceutical nakanjani izosebenzisa izinzuzo zayo futhi yenze konke okusemandleni ukusiza ukuvikela nokulawula ubhubhane.
Ngaphambi kwalokhu, uChangshan Pharmaceutical waxhumana nohulumeni wasekhaya ngoJanuwari 29 futhi wanikela ngama-yuan ayi-2 million ngemali yokuvimbela nobhubhane. Selokhu kwaqubuka i-New Coronary Pneumonia, iChipshan Pharmaceutical isiqinisile isibopho sayo futhi yagcizelela ukubeka izimpilo zabantu kanye nezempilo kuqala. Sisebenza kanzima ukuqinisekisa ukutholakala okujwayelekile kwemijovo ye-heparin ye-anticoagulant low heparin eHubei nakwezinye izindawo. Esimweni lapho i-logistics Logistics kanye nomthamo wemithwalo ungakabuyiswa, inkinga yokuhamba iyaxazululwa kungakhathalekile ukuthi kubiza malini, futhi kuthunyelwe imijovo eminingi yemijovo enesisindo esisezingeni eliphansi eWuhan naseHubei.
Njengowukuphela kwebhizinisi eliholayo lasekhaya emkhakheni we-heparin elinama-heparin aluhlaza kuya kumikhiqizo ephansi yesisindo se-heparin yomjovo kanye noxhaxha oluphelele lwemboni ye-heparin, ukuthengiswa komjovo ophansi we-heparin wesisindo wamakhemikhali owenziwe yi-Changshan Pharmaceutical wabalwa u-40% wemakethe kazwelonke. Umkhiqizo womgogodla womkhiqizo omncane we-heparin calcium umjovo udale isilinganiso sokukhiqizwa kwebhizinisi le-YBH03832006, eliphakeme kakhulu kunamazinga kazwelonke nawemboni, abekwa kuqala ekuthengisweni kwasekhaya iminyaka eyisishiyagalolunye elandelanayo.
Kuyaqondakala ukuthi isenzo sikaChanshan Pharmaceutical sokufeza ngenkuthalo izibopho zaso zenhlalo nokusiza ukuvimbela nokulawula lolu bhubhane futhi sebethole udumo nokusekelwa ngumphakathi. Umlingani wale nkampani e-US ConjuChem unikele ngemaski eyi-8,000 kule nkampani ukuxhasa ukwenziwa kwale nkampani, kanti abanye ozakwethu nabo bazwakalise inhloso yabo yokunikela ngemaski. (Liu li)